Makurukota ari kupedzisa: Ndege pakati pePapua New Guinea neKiribati
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Makurukota ari kupedzisa: Ndege pakati pePapua New Guinea neKiribati
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kiribati Breaking News • Papua New Guinea Kupwanya Nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo Kiribati Yekutakura Gurukota parizvino iri kutaurirana nendege dzakananga pakati pePapua New Guinea neKiribati.
Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuGateway Hotel muPort Moresby kuti chibvumirano chisainwe uye chigadziriswe.
Nhaurwa dzakakurukurwa mangwanani ano dzaisanganisira kupihwa kwakanyorwa gwaro rePNG-Kiribati Air Services Chibvumirano chekubatana pamwe nekutambirwa, uye kuzivikanwa kwenzvimbo dzekushandira mapato akasiyana kuitira kusangana nekugamuchirwa.
Iyo hurukuro dziri kutarisa mikana yekushandisa Federated States yeMicronesia seyepakati pasi pechibvumirano.
"Chero zvazvichave, zvakanangana zvichakurukurwa pakati pendege dzedu mbiri," anodaro Munyori weDhipatimendi rezvekutakura, Roy Mumu.
Zvinyorwa zvechibvumirano zvichasainwa nemakurukota ezvekutakurwa kwenyika dzese zvichitevera hurukuro uye mhedzisiro yehurukuro idzi mangwanani.
Parizvino, PNG ine gumi nemana zvibvumirano zvebasa remhepo neakasiyana eECEC hupfumi, kusanganisira nyika dzakavakidzana dzePacific nyika dzakadai seSolomon Islands, Fiji, Vanuatu uyezve Australia neNew Zealand.
Chibvumirano chachangobva kuitika chakasainwa pakati peFSM icho chiri kufambisa nendege mbiri pasvondo chakabatanidzwa naAir Niugini.
“Dzimwe nhaurirano dzinoita kuti chibvumirano chevashandi vezvemhepo vasaine zviri pamutemo, zvakare yekutanga hurukuro zhinji ichauya; ndinotarisira kuendesa kune chimwe chinhu chekongiri icho chichagonesa uye nekuvandudza kubatana kwemhepo nenyika dzedu dzezvitsuwa zvePacific, ”akadaro Mumu.
Zvese zvakasarudzika zvekutaurirana zvichagadziriswa manheru ano zvichienderana nezvakabuda mukutaurirana kwanhasi nevamiriri vevashandi vemhepo vanobva kuKiribati.
Zvichakadaro, director director wevashandi vehurumende, Aako Teikake, akatenda Hurumende yePNG nekutambira Kiribati mukugadzira chibvumirano chemabasa emuchadenga, izvo zvichakosha mukuwedzera kwehukama hweAir Kiribati kuburikidza nehutongi.
"Tiri kutarisira kuve nemhedzisiro yakanaka uye ine zvibereko," akadaro.